Dzidza maitiro ekugadzirisa yako nyowani iPhone 7 nemazita eIFixit | IPhone nhau
Dzidza maitiro ekugadzirisa yako nyowani iPhone 7 ine iFixit maidi
Iwe ungatove uine nyowani iPhone 7 kana iPhone 7 Uyezve, michina miviri Flagship yevakomana veCupertino. Midziyo yakatakurwa nezvinhu zvitsva senge kutsva kwemvura nyowani, bhatani reKumba nyowani, kana makamera matsva pakati pezvimwe zvinhu zvakawanda.
Une mudziyo wako mutsva, asi chii chinoitika kana iwe ukatanga kuve nezvinetso nazvo? Tinokurudzira kuti uende nazvo kuApple StoreIwo matsva chaizvo maturusi uye iwe unofanirwa kutora mukana warandi yayo, kunyangwe kana uine dambudziko risina kuvharwa newarandi, inogona kugadziridzwa kuApple Chitoro mahara, saka usazeze kuitora uende nayo. Kunyangwe kana iwe uri mumwe wevaya vanoda kutora maturusi uye wotanga kugadzirisa iyo iPhone, iwe uri mune mhanza. Vakomana paIFixit vachangoburitsa magwaro ekutanga eiyo nyowani iPhone 7 uye iPhone 7 Plus.
Ehezve, ivo vanoenda zvishoma zvishoma ... repairability giredhi yegumi nenomwe kubva pagumi, giredhi risina kushata zvachose tichifunga kuti chishandiso chakagadzirwa kumamirimita uye zviri kuramba zvichitiomera kuti tizvigadzirise isu pachedu. Pazasi isu tinokupa iwe neese matsva matsva (bhatiri, skrini, screws, uye taptic injini) kubva kune vakomana paIFixit iyo yaunogona kugadzirisa zvinhu zvakasiyana pane yako nyowani iPhone 7 uye iPhone 7 Plus.
Unoziva, mamwe madhairekitori ayo priori anoita kunge akareruka asi izvo zvaunofanira kungwarira nazvo. Zvisinei, sezvatinokuudza, Kana iwe uine dambudziko ne iPhone yako 7, zvakanak kuitora kuApple Chitoro cheGenius kuti ikutarise.. Kana iwe ukashinga kuivhura, iwe ucharasikirwa newarandi, saka chenjera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Dzidza maitiro ekugadzirisa yako nyowani iPhone 7 ine iFixit maidi
Goverana kurudziro uye mufaro naMnu Anoshamisa
Apple inorasikirwa zvakare ichipesana neVirnetX patent troll